10 Talooyin si aad u hesho Hoyga Ardayga Caalamiga ah ee ugu Fiican Bartamaha London 2022
Wax ku barashada dibadda waxay noqon kartaa habka ugu wanaagsan ee lagu kasbado aqoon dheeri ah, laakiin, maahan gabal keega ah. Laga soo bilaabo fiisada illaa deeqaha waxbarasho iyo hoyga howlaha bangiyada, waxaad u baahan tahay inaad wax walba qorsheyso. Sannad kasta waxaa jira tanno arday caalami ah oo imanaya bartamaha London raadinaya ah ugu fiican hoyga ardayda.
Waa inay ahaato mid aad u xiiso badan inaad timaado meel cusub. Laakiin, maxaad hoos ugu dhigeysaa xiisaha badan ee qorsheynta badan markii aad yeelan karto shirkado hoy arday ah oo kaa caawin kara inaad wax walba qorsheyso. Halkan, waxaan ku soo bandhigi doonaa qaar ka mid ah talooyinka kaa caawin doona inaad ka hesho hoy arday mid ka mid ah magaalooyinka ugu qaalisan adduunka.
1. Deeqo waxbarasho
Deeqaha waxbarasho ayaa si kala duwan uga shaqeeya qaybtan adduunka. In kasta oo ardayda Midowga Yurub ay si fudud u helaan deeqo waxbarasho, ardayda caalamiga ah waxaa laga yaabaa inaysan si fudud u helin deeqo waxbarasho. Qaar ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ardayda Caalamiga ah ay eegi karaan kharashka tacliinta ayaa ah.
Deeqaha Gates Cambridge Scholarships.
Deeqaha Rhodes ee Jaamacadda Oxford.
Deeqaha Cilmi-baarista Caalamiga ah ee Edinburgh.
Denys Holland Scholarship ee Jaamacadda College London.
Jaamacadda Bristol Deeqaha waxbarasho ee Xafiiska Caalamiga ah.
Jaamacadda Galbeedka London Deeqaha Deeqaha Caalamiga ah.
Deeqdani waxay noqon kartaa mid ay dowladdu maalgaliso ama qaar ka mid ah ururada aan dawliga ahayn. U diyaargarowga deeqaha waxbarasho ayaa loo heli karaa ardayda dhigata shahaadada koowaad. Inta masters-ka, waxaad heli kartaa deeq waxbarasho oo guud.
Waxaa jira shuruudo badan oo aad u baahan tahay inaad buuxiso si aad u hesho deeqdan waxbarasho. Tixgelinta tirada kharashaadka hoyga ardayda iyo kharashaadka kale ee jaamacadaha ku yaal bartamaha London, helitaanka deeq waxbarasho ama amaahda ardaygu ma aha fikrad xun!
Fiisaha ardaygu waa shardi u ah barashadaada dibadda. Xeerarka fiisaha waxay kuxiranyihiin wadanka aad ka timid. Haddii aad ka timid Midowga Yurub, Aagga Dhaqaalaha Yurub, ama Switzerland markaa ma jirto sabab aad uga walwasho Fiisaha. Laakiin, haddii aad tahay arday caalami ah oo ka badan Visa wuxuu noqon karaa arrin.
Halkan, shirkadaha guryaha ardayda sida oxcee, kuma caawin karaan oo keliya inaad hesho meel wanaagsan oo aad ku noolaato laakiin, taageero weyn oo fiiso ah. Haddii aad raadineyso shaqo waqti dhiman ah oo ay weheliso daraasadaha, markaa waxaad u baahan doontaa rukhsad gaar ah.
Waxaa jira fiisooyin laba nooc ah oo wax lagu barto dibadda. Mid waa fiisooyinka muddada-gaaban ah kan kalena waa fiiso waqti dheer. Haddii koorsadaadu ay ka badan tahay 6 bilood, waxaad u baahan doontaa fiiso muddo dheer ah.
3. Diyaarinta Imaatinka
Maxaan uga hadlaynaa tan? Sababtoo ah haddii aad qorsheyneyso inaad raadiso hoygaaga arday ee magaalo sida London markaa waa inaad qorshaysaa. Haddii aad imaaneyso London waxaa jira waxyaabo aad u baahan doonto.
Xullo iyo Dhig Xarun
Kuwani waa waxyaabaha aasaasiga ah ee laga yaabo inaad u baahato marka ugu horreysa ee aad timaado London. Waxaad booqan kartaa magaalada laba ama saddex bilood ka hor. Waxay kaa caawin doontaa inaad dhex dhexaadiso meelaha kala duwan ee ardayda loo dejiyo ee ku yaal bartamaha London.
Marka, markaad bilowdo daalacashada guryaha, waxaad u baahan doontaa miisaaniyad. Waxaa jira kharashyo badan oo soo noqnoqda marka laga reebo ajuurada kuleejka iyo hoyga ardayda. Qaar ka mid ah ayaa ah.
Kirada alaabta guriga
Maktabada ayaa Gudubta
Sidoo kale, waxaa jira dhar, dukaamaysi, iyo kharashyo kale. Waxaad u baahan tahay inaad xisaabiso kharash kasta oo ku jira buuggaaga.
Lammaanaha ugu muhiimsan ee helitaanka hooyga ardayda ugufiican khariidadaha London dhexdeeda ah. Waxay kaa caawin karaan inaad fahanto masaafada saxda ah ee hoy kasta oo ka jirta xerada jaamacaddaada. Halkan, waxaad ku isticmaali kartaa khariidadaha Google. Waxay kaa caawin kartaa inaad hesho jihooyinka. Waxay kaloo kaa caawin kartaa inaad fahanto deegaanka.
Hab kale ayaa ah inaad is muujiso agagaaraha aagga. Marka, waxaad heli doontaa fahamka deegaanka ku xeeran hoygaaga ardayga. Tusaale ahaan, haddii aad u heleyso hoy arday oo loogu talagalay ardayda Hindida ah ee khudradda cuna, waxaad u baahan tahay inaad baartid aagga si aad u ogaato inay ku siineyso fursado cunto oo noocaas ah agagaarka London.
6. Wadaagista Qolka
Markaad raadineyso hoyga ardayda ee bartamaha London, waxaa jira xulashooyin kala duwan. Waxaad raadin kartaa hoolalka jaamacadda. Kuwan ayaa ka jaban. Laakiin, waxay leeyihiin oo keliya tas-hiilaadka aasaasiga ah. Waxaa jira guryo arday. Laakiin, waxay noqon karaan xilliyadii guusha!
Kuwa ugu doorbidaa waa PBSAs. Meelahan ujeeddooyinka ah ee ardayda loo dhisay waxay leeyihiin dhammaan tas-hiilaadka. Laga soo bilaabo qolka TV-ga ee internet-ka bilaashka ah iyo alaabta qalaad ilaa aagagga ciyaarta, guud ahaanba waa baashaal. In kastoo ay qaali noqon karaan. Marka, waxaad u baahan doontaa mid ka mid ah shirkadahaas dejinta ardayda ee dhinacaaga London.
Dhinac kale ee hoyga waa siyaasadaha wadaagga qolka. Waxaa jira ikhtiyaarro sida 3 Qol jiif ah, laba degganaan, iyo kuwa kale oo loogu talagalay hoyga ardayda ee London. Marka, kahor intaadan xulan hoygaaga, iska hubi siyaasadaha wadaagga qolka.
PBSAs waxay bixiyaan tas-hiilaadka ugu fiican. Waxaad heli kartaa fiidnimo dabacsan kadib muxaadarooyin caajis ah. Waxay leeyihiin jimicsiyo, baarar, maktabado, goobo lagu ciyaaro, iyo xarumo kale. Qaar ka mid ah iyaga ayaa sidoo kale bixiya adeegsiga internet bilaash ah. Waxay kaloo bixiyaan kaararka maktabadda. Halka kuwa kale ay leeyihiin qol shineemo. Marka, kama waayi doontid filimaanta ugu dambeeyay.
8. Shabakada Tube
Hoy kasta oo aad dooratid ardaydu, waa inuu u dhawaadaa boosteejada tubbada laga raaco. Sababta halkan waa mid fudud. Waxaad ku haysataa arrimaha maaraynta waqtiga nolosha ardayga. Marka, luminta waqti badan inta lagu jiro safarka kuma jiro saxankaaga.
Sidii aan horeyba uga soo hadalnay, waxaad qaadan kartaa kaar ama kaar tareen oo lagu raaco safarka maalinlaha ah. Laakiin, saldhig tuubo oo u dhow ayaa faa'iido leh.
Raadi kamaradaha CCTV, kaararka dijitaalka ah ee dijitaalka ah, iyo nidaamyada digniinta dabka, marka aad dooranayso hoyga ardayda. Waxaad tahay nafta ugu qaalisan kuwa aad jeceshahay mana jeclaan doontid inaad qatar gasho.
Waxba lama hubo nolosha. Marka, caymisku ma aha fikrad xun. Ardayda Midowga Yurub, dowladdu waxay leedahay caymisyo daryeel caafimaad, laakiin, ardayda caalamiga ah, waxaad u baahan tahay inaad mid u iibsato naftaada.
Laga soo bilaabo fiisaha illaa caymiska caafimaadka, waxaan ka wada hadalnay wax walba. Haddana, cunsurro badan ayaa saameeya go'aannadaada. Laakiin, habka ugu wanaagsan ee lagu heli karo qiimo jaban hoyga ardayda in bartamaha London waa in la helo caawimaad xirfad leh.
Haddii aad shaki dheeraad ah ka qabtid hoyga ardayda ama xitaa deeqaha waxbarasho, ka dib faallo qeybta hoose!
Post Next:18 Koorsooyin Fiisigis Online ah oo Bilaash ah oo wata Shahaadada Ardayda
Pingback: 5 -ta dugsi sare ee ugu fiican London